WAR CUSUB: Gaarigii lagu soo qaadi lahaa Farmaajo oo qarax lagu arkay – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
WAR CUSUB: Gaarigii lagu soo qaadi lahaa Farmaajo oo qarax lagu arkay
Gaari loogu talla-galay in murashax Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) looga soo qaado Garoonka Aadan Cadde, ayaa saqdii dhexe ee xalay lagu arkay qarax miino, oo qaybta hoose looga soo xiray.
Gaarigan, ayaa la ogaaday in qaraxa uu ku xiran yahay, markii ay baaritaan marsiiyeen ciidamada suggaaya ammaanka hoyga loogu talla-galay in Ra’iisal Wasaarihii hore ee Somaliya laga dejiyo Magaalada Muqdisho.
Sarkaal ka tirsan Saraakiisha sugeysa nabadgelyada hoygan, oo ku yaala agagaarka Isgoyska KM4, ayaa sheegay in gaarigaasi uu ka yimid dhinaca Hotel Jazeera, ka hor intii aan qaraxa lagu arkin.
Sarkaalkan, ayaa yiri “Markii ugu dambeysay gaariga wuxuu ka yimid Hotel Jazeera, oo ay degan yihiin niman uu ku jiro Fahad Yaasiin, oo ka mid ah dadka sida wayn ugu ololeynaya Farmaajo.”
Isagoo sii hadlayay ayuu yiri “Qaraxa waxaa gaariga looga soo xiray candhada, waxaana lagu ogaaday in qarax uu ku xiran yahay, ka dib markii lagu baaray guriga la rabo Farmaajo inuu ku qaabilo martida, oo ku yaala soona KM4. Dhammaan gaadiidka iyo xubnaha soo booqanaya dhismahan waala baaraa.”
“Gaariga ayaa waxaa saarnaa rag ololaha kala shaqaynaya Farmaajo, ma rabo in aan magacyadooda sheego, laakiin waxay leeyihiin waxba kama ogin arrinta qaraxa.” Ayuu yiri Sarkaalkan.
Waxaa uu intaa ku daray “Xaqiiqdii wal-wal xoogan, ayay nagu beertay dhacdadaan. Ciidamada miino baarista ayaana gacan naga siiyay in qaraxa laga furo gaariga.”
General C/laahi Cali Caanood oo ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka, qaabilsana ammaanka Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo), ayaa wada baaritaano la xiriira qaraxaasi, goobta looga soo xiray gaariga iyo weliba cidda ku soo xirtay.
Waxaase jira warar sheegaya in tuhun laga qabo in gaariga qaraxaasi looga soo xiray dhinaca Degmada Wadajir, oo Jazeera Hotel-na uu ku yaalo.
Farmaajo, ayaa ololihiisan waxaa kala shaqaynaya xubno la sheegay inay horey ula soo shaqeeyeen Madaxtooyada Somaliya, balse markii dambe ay siyaasadda ku kala irdhoobeen.
Gaarigan, ayaa waxaa qaraxa lagu arkay, xilli Talaadada maanta lagu wado in Magaalada Muqdisho uu soo gaaro murashax Farmaajo. Tani ayaa ah arrin dareenkeeda leh.
Previous: Tirada Maxaabiista ku dhimatay Xabsiyada Indaia 2010 ilaa 2015-ka
Next: XOG: Xasan Sheikh oo dabin u dhigay Jabriil Ibrahim C/dulle+Qorshe halis ah..